Somaliland oo ku gacan seyrtay dalabkii cayrinta wakiilka Jabuuti - Awdinle Online
Somaliland oo ku gacan seyrtay dalabkii cayrinta wakiilka Jabuuti
Xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiye Madaxweyne Muuse Biixi ayaa maanta markii u horeysay ka jawaabtay baaqyo kala duwan oo ka soo baxay qaar kamid ah xisbiyada Mucaaridka iyo xildhibaano.
Somaliland ayaa gebi ahaanba ku gacan seyrtay dalabkaasi loogu soo jeediyay in deegaanadeeda laga cayriyo wakiilka u jooga Jabuuti, kaasi oo uu xisbiga Ucid u qabtay muddo dhan 24-saac gudahood in looga saaro Somaliland.
Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir “Faratoon”, Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland oo arrimahaasi ka hadlay ayaa sidoo kale waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay dacwad uu Wakiilka Jabuuti u fadhiya Somaliland lagu sheegay in uu ka gudbiyay Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid.
Wasiir Faaratoon ayaa waxa kale oo uu dalka Jabuuti ka difaacay eedeymo ay u soo jeediyeen Mas’uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga Ucid, kaasi oo ay ku sheegen in dowladda Jabuuti ay tahay cadowga koowaad ee leedahay Somaliland.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yiri “Haba yaraate wax dacwad ah oo ka dhan ah Faysal iyo Wakiilka Jabuuti ee Somaliland oo Xukuumad ahaan na soo gaadhay ma jiraan, labada dhinac iyo dhinaca kaleba midna kama hayno wax dacwad ah”.
“Faysal wuu hadlay wuxuu ku hadlayeyna waa la arkaayey, Wakiilku wax dambiya muu galin, sabab dalka aanu uga saarnaana ma jirto, kama saarayno”.
Wuxuuna intaas kusii daray “Waxaa haboon in dacaayadaha la joojiyo oo wixii khalad ah la joojiyo, umaddana yaan la khaldin, oo yaan wax kasta la buun-buunin”.
Xukuumada Somaliland ayaa dowladda Jabuuti u aragta saaxiib dhow oo cilaaqaad fiicani kala dhaxeeyo, halka ay qaar kamid ah xisbiyada mucaaridka Somaliland u arkaan dowlad cadow ku ah Somaliland, isla markaan gacan saar dhow la leh dowladda federaalka Soomaaliya.
Next articleJubbaland oo soo iibsatay diyaarad lagu dhabar jabinayo xayiraadda DF ee Kismaayo
Howlgal culus oo laga fuliyay Jowhar, kadib dilal ka dhacay